Cristiano Ronaldo oo Doonaya inuu ka Tago Real Madrid Kadib Markii uu Jabiyay Balankii…? – Gool FM
CR Shariif June 7, 2018
( Madrid ) 07 Juunyo 2018. Xiddiga adduunka ugu fiican ee Cristiano Ronaldo ayaa qaadanaya go’aan aan gambad laheyn isagoo ka tagaya kooxda Real Madrid, sida ay warinayaan wargeysyada Portugal.
Hadalkii uu jeediyay Roanaldo Finalkii Champions League ayaa soo idleynaya waayihiisa garoonka Bernabeu.
Waxaa isa soo tarayay todobaadyadii lasoo dhaafay in madaxweynaha kooxda Florentino Perez iyo maamulkuba ay ka caroodeen hadalkii uu yiri ronaldo.
Sidaa darteed majalada Record waxay tilmaameysa in 33 jira reer Portugal uu maaka ku hayo inuu ka dhaqaaqo kooxda heysta koobka yurub — iyadoo horyaalada England, France iyo Italy ay yihiin meelaha macquulka ay tahay inuu u dhaqaaqo.
Heshiiska uu hada kula jiro kooxda ayuu ku qataa £350,000 oo gini asbuucii laakiin wxuu doonayaa inuu kaga saramaro dhanka mushaarka laacibka Neymar oo todobaadkii qaata £619,000, halka uu Messi isna jeebka ku rito mushaar dhan £673,000 todobadii maalinba.
Xiddiga hore ee Manchester united ayay wararku sheegayaa inuu codsaday mushaar waali ah kasoo todobaadkii uu ku qaadano £1.35m oo gini, balse maamulka Real Madrid ma aysan aqbalin dalabkaas.
Ronaldo ayaa dhanka kale ka cabanaya inuu balanta kaga baxay Madaxweynaha kooxda Florentino Perez kaa oo ay ku balameyn inuu mushaar kordhin u sameyo intii lagu guda jiray suuqii xagaagii hore.
Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo saddex xiddig u diray Ruushka si ay qayb ugu noqdaan furtiaanka koobka adduunka
Ronaldo oo tilmaamay in xulka Portugal uusan qeyb ka ahayn xulalka loo saadaalinayo inay ku guuleysan karaan koobka aduunka